“विद्युतीय कारहरूले यातायातका वर्तमान समस्या हल गर्न सक्ने छैनन्” « Salleri Khabar
“विद्युतीय कारहरूले यातायातका वर्तमान समस्या हल गर्न सक्ने छैनन्”
एक रिपोर्टले भनेको छ,”यातायातका सबै साधनहरूलाई विद्युतीय बनाए तापनि तेलबाट चल्ने गाडीहरूको प्रयोगलाई बन्द गर्न नसकिने देखिन्छ ।”
रिपोर्टले विद्युतीय कारहरूको प्रयोगले ट्राफिक जाम, शहरी फैलावट, पार्किङ स्पेस, लगायतका थुप्रै समस्याहरू निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।
द सेन्टर फर रिसर्च इन्टु इनर्जी डिमान्ड सोलुसन्स (क्रेड्स) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टका अनुसार विश्वभरका सरकारहरूले अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय कार भन्दा पनि जनतालाई अनिवार्य रुपमा पैदल यात्रा र साइकल यात्रा सहितको जीवन स्ट्यान्डर्ड रणनीति ल्याउनु पर्ने बताएको छ । यसका लागि सरकारी निकायहरूले सडक गुणस्तर विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
क्रेड्स संस्थाको अफिसियल लोगो ।
क्रेड्स, बेलायतका करिब ८० भन्दा बढी बुद्धिजिवीहरू मिलेर बनेको एक प्रतिष्ठित सोध-अनुसन्धानमुलक संस्था हो ।
रिपोर्ट लेखकहरू मध्येका एक प्राध्यापक जिलियन इनाबेल भन्छिन्,”खास भन्नु पर्दा, यातायात व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारहरूद्वारा अन्धाधुन्ध नीति-नियम बनाइएका छन् । यातायातको माग घटाउनुको साटो सरकार उहिल्यैदेखी केवल सडक विस्तार गर्न लागिपरेको छ । यो बिलकुल गलत भैरहेछ ।”
कार चार्जिङका क्रममा एक कार मालिक । तस्बीर स्रोतः बीबीसी ।
त्यसो भए व्यक्तिगत कार भएकाहरूका लागि के गर्न सकिन्छ त ?
रिपोर्टले स्पष्ट रुपमा भनेको छ- धेरै मान्छेहरू अहिले नीजि सवारीसाधनको रुपमा कारमा परनिर्भर छन् ।
बेलायतको एक विद्युतीय कार । तस्बिरः बीबीसी ।
तर उनीहरूले यो पनि उल्लेख गरेका छन् कि अझै पनि अधिकांश मान्छेहरू दिनहुँ सार्वजनिक यातायात, पैदल यात्रा या साइकल यात्रा प्रयोग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम, प्रदुषण र सडक असुरक्षामा सुधार आएको छ भने मान्छेहरू बीच सामाजिक भावनाको परस्पर बृद्धि पनि भएको छ । त्यति मात्र नभएर यसले गर्दा पार्किङ स्पेस समेत घट्न गई बस्ती तथा पार्क निर्माणमा मद्दत पुगेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार सार्वजनिक यातायात, पैदल यात्रा तथा साइकल यात्राको यो क्रमलाई अझ एक ट्रेण्डको रुपमा प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।
लण्डन ब्रीजमा सार्वजनिक बस, साइकल यात्री र पैदल यात्रीको कोलाज । तस्बीरः साइक्लिङ फेलासिज
मान्छेहरूलाई कार बिना जीवनयापन गर्न कसरी प्रेरित गर्ने ?
रिपोर्टको लेखन समूहकी इनाबेलका अनुसार नीजि कारको प्रयोग वास्तबमा भन्नु पर्दा निरर्थक रहेको बताएकओ छिन् । किनकि सबै कार आफ्नो कुल आयुको झण्डै ९८ प्रतिशत समय पार्किङ गरिएका भेटिन्छन् ।
उनी भन्छिन्,”जब तपाईंले कार किन्नुहुन्छ, तब स-साना यात्रामा पनि यसको प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ । तर यो वास्तबमै एक महङ्गो लगानी हो । यसको साटो बरू तपाई अन्य कुरामा यो पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ।”
के विद्युतीय कारहरूले कत्ति पनि फाइदा दिन सक्दैनन् त ?
रिपोर्टले बेलायत सरकारको पेट्रोल-डिजेल कारहरूको अन्त्य गर्ने कदमको प्रशंसा पनि गरेको छ ।
चार्जिङ गाडीहरूलाई चार्ज गर्न शहरी क्षेत्रमै पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
किनकि शहर क्षेत्रमा गाडी चार्जिङका लागि आवश्यक स्थानको एकदमै अभाव हुन्छ ।
तर यसले के पनि औंल्याएको छ भने, चार्जिङ गाडीहरूलाई चार्ज गर्न शहरी क्षेत्रमै पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ । किनकि शहर क्षेत्रमा गाडी चार्जिङका लागि आवश्यक स्थानको एकदमै अभाव हुन्छ । यसले गर्दा ड्राइभरहरूले विस्तारै हाइब्रिड गाडीहरू किन्न थाल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार सबै ठाउँको साटो बरु केही ठाउँमा भने डिजेल-पेट्रोल ब्यान गर्ने र त्यसको प्रभावकारीतालाई अध्ययन गर्दै अरु स्थानमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने या नलैजाने भन्नेबारे थप छलफल गर्नुपर्छ ।
बेलायतका कार हुने घरधुरीको विवरण । तस्बीरः बीबीसी
यस्तो अवस्थामा ड्राइभर विहीन कारले केही भुमिका खेल्लान् ?
सडक यातायातमा आउँदै गरेको नवीनतम् छलाङ हो- ड्राइभर विहीन कार । अर्थात् चलाउनका लागि ड्राइभर नचाहिने कार ।
तर क्रेड्सको यो रिपोर्टले ड्राइभर विहीन कारणको अवधारणाले अहिलेको भन्दा झनै ठुलो ट्राफिक जामको समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।
बीबीसीको सहयोगमा राजन के.सी. प्रमोदको प्रस्तुति ।